एक महिलाको गर्भमा १३ सन्तान ! « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
एक महिलाको गर्भमा १३ सन्तान !
८ असार २०७९, बुधबार ११:२७
यो आश्चर्य भएता पनि यो कुरा सत्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको छन् । मारित्जा हर्नान्डेज मेन्डेजल नाम गरेकी ती महिलाले गर्भमा हुर्किदै गरेका १३ सन्तानलाई उनले एकैपटक जन्म दिने भएकी छन् । यस अघि मारित्जाले पहिलो पटक एउटा बच्चालाई जन्म दिइन् दोस्रो पटक जुम्लिया बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् भने तेस्रो पटक उनले एकैसाथ तीन बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् । मारित्जाको श्रीमानको नाम फायरम्यान एन्टोनियो सोरियानो हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार त्यहाँका काउन्सिलर गेरार्डो ग्युरेरोले बालबच्चाको पालनपोषणको लागि सहयोगको अपिल गर्दै महिलाको गर्भमा १३ जना बच्चा हुर्किरहेको बताएका हुन् ।
१३ सन्तानमहिला गर्भ